Mey 14, 2018 Admin
New York drafitra blockchain afovoan-tanàna
Nambara Alatsinainy nandritra ny herinandro blockchain any New York, ny New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) ny fandefasana hetsika maro hametraka ny tanàna eo amin'ny sarintany toy ny blockchain teknolojia Hub. Lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny drafitra hanokatra “Blockchain Center” izay samy mampirisika fahatsiarovan-tenan'ny tsirairay ny teknolojia sy hanamora ny resaka indostria eo mpandray anjara.
Ny NYCEDC ihany koa dia nanambara ny fifaninanana, tokony hanomboka amin'ny tara 2018, natao mba hiteraka hevitra ho fanatsarana ny asa monisipaly amin'ny blockchain Tech.
Samourai ary goTenna fandefasana Bitcoin kitapom-batsy izay miasa ivelan'ny aterineto
Fifandraisana aterineto satria tsy misy foana, azo antoka na tsy miankina, cryptocurrency mpampiasa mila fomba hafa mifandray amin'ny tambajotra. Ary ny New York-monina startup goTenna, naorina in 2012 ny Breziliana sy ny mpiray tam-po Daniela Jorge Perdomo, dia miara-miasa amin'ny Samourai Wallet mba hanomboka ny fampiharana Android tamin'ity fahavaratra ity izay manome fahafahana ireo mpampiasa mba handefa bitcoin vola tsy misy aterineto.
“Mila ho afaka mandany ny bitcoin doza na dia ao anatin'ny faritra,” goTenna injeniera Richard Meyers hoy, iray tam-po tamin'ny fitanisàna ny Perdomo’ vao haingana Puerto Rico asa, izay nanampy ny olona fitaovana goTenna reconnect taorian'ny Rivo-doza Maria. “Raha mbola manana ny fomba handidy ny finday, ianao dia afaka ny ho ka meshed sy mifandray.”
“Manolotra ny hafa izay kokoa ny sivana-mahatohitra,” hoy Meyers.
Florida mpamory hetra no voalohany governemanta US fahafahana misafidy ny hanaiky Bitcoin
A Florida faritra mpamory hetra efa niasa tamin'i Bitcoin fandoavam-bola processeur BitPay hanaiky cryptocurrency ho isan-karazany ny asa.
Seminole County mpamory hetra Joel Greenberg hoy ny fanambarana Alatsinainy fa ny biraony dia haka Bitcoin ny fandoavam-bola mifandray amin'ny mpamily ny fahazoan-dalana sy ny ID karatra, fiara Tags sy ny anaram-boninahitra sy ny fananany hetra.
Greenberg voalaza ao amin'ny fanambarana:
“Ny tanjon'ny ny fotoam-pitondràny ao amin'ny birao dia ny hahatonga ny mpanjifa traikefa haingana, mahay sy mahomby kokoa, sy hitondra fanjakana tolotra avy any amin'ny taonjato faha-18 ho any amin'ny taonjato faha-21 sy lalana iray no cryptocurrency koa ny fandoavam-bola ho an'ny safidy… miaraka amin'ny Seminole County mpamory hetra, ny biraon'ny, efa anjara ny governemanta voalohany fahafahantsika misafidy ny hanaiky Bitcoin… ny fanaovana azy io, ary miray volo mora ho azy ireo,” dia nandroso.
NASDAQ-Powered cryptocurrency fifanakalozana ny hanomboka ny volana Jona
dx.exchange, izay nametraka ny hanomboka amin'ny volana manaraka, no voalohany crypto fifanakalozana Powered by NASDAQ. "Ny mahatsara ny fiaraha-miasa io dia avo telo heny: ny marika anarana, ny teknolojia sy ny fitsipika,"Hoy DX Exchange Tale Jeneralin'ny Daniel Skowronski.
Raha ny voalohany dia tena tombony fanazavana tena, Nanazava bebe kokoa Skowronski fa ny teknolojia dia miantehitra amin'ny NASDAQ ny foto-drafitrasa, toy ny mifandraika maotera - ampiasain'ny over 70 fifanakalozana manerana izao tontolo izao.
SAP ny hanomboka tetikasa blockchain famatsian
Iraisam-pirenena ny rindrambaiko mafy SAP dia fanitarana ny asany amin'ny blockchain ho ao an-famatsian rojo toerana.
SAP mitady hampihatra ny teknolojia amin'ny fambolena famatsian rojo amin'ny lalana mankany amin'ny Farm ny Consumer fandraisana an-tanana.
Torsten acce, SAP ny blockchain mitarika nanao hoe: “Ny teknolojia kokoa mamela ny orinasa mba mamantatra ny am-boalohany ny sakafo, miditra fangatahana sy ny fanatitra, ary manamarina ary manaova varotra.”
Tamin'ny faran'ny Janoary, izany ...
Fanaovana antsirambina ny fiarovana ...
Previous Post:Crypto Tanora